Maitiro Ekutarisa Yako Organic Kutsvaga (SEO) Performance | Martech Zone
Sezvo ndashanda kuvandudza mashandiro ehupenyu hwerudzi rwese rwesaiti - kubva kumega saiti ane mamirioni emapeji, kune ecommerce saiti, kune madiki uye emuno mabhizinesi, pane maitiro andinotora anondibatsira kuongorora nekumhan'ara mashandiro evatengi vangu. Pakati pemakambani ekushambadzira edhijitari, ini handitende kuti maitiro angu akasarudzika… asi zvakanyatsojeka kupfuura kutsvagiswa kwehupenyu (SEO) agency. Maitiro angu haana kuoma, asi anoshandisa akawanda maturusi uye yakanangwa kuongororwa kune wese mutengi.
SEO Zvishandiso zveOrganic Kutsvaga Kuita Kuongorora
Google Search Console - funga nezveGoogle Tsvaga Console (yaimbozivikanwa sewebhumaster maturusi) senzvimbo ye analytics yekukubatsira iwe kuti uone kutarisa kwako mumhedzisiro yekutsvaga. Google Search Console inozoona nyaya neako saiti uye ikubatsire kuongorora masosi ako kusvika pamwero. Ndakati "kusvika padanho" nekuti Google haipe data rakazara revashandisi veGoogle. Zvakare, ini ndawana zvikanganiso zvishoma zvekunyepa zvinonyangarika zvobva zvanyangarika. Zvakare, zvimwe zvikanganiso hazvikoshe zvakanyanya kuita kwako. Nitpicking Google Search Console nyaya dzinogona kutambisa tani yenguva… saka chenjera.
Google Analytics - Analytics inokupa iwe chaiyo data yevashanyi uye iwe unogona kugovera zvakananga vashanyi vako nekwanisi yekuwana yekutarisa yako organic traffic. Iwe unogona kuenderera zvakare kupaza izvo pasi kuva vatsva uye vanodzoka vashanyi. Sezvo nekutsvaga kwekutsvaga, analytics haiburitse data revashandisi avo vakapinda muGoogle saka kana iwe uchipaza iyo data kuita mazwi akakosha, zvivakwa zvekutumira, nezvimwe. Urikungowana chete subset yeruzivo iwe yaunoda. Nevanhu vazhinji vakapinda muGoogle, izvi zvinogona kukutsausa.
Google Bhizinesi - Tsvaga injini mhedzisiro mapeji (SERPs) dzakapatsanurwa kuita nzvimbo nhatu dzakasiyana dzemabhizinesi emuno - kushambadza, mepu kurongedza, uye mhedzisiro mhedzisiro. Iyo mepu kurongedza inodzorwa neGoogle Bhizinesi uye inotsamira zvakanyanya pane kwako mukurumbira (wongororo), kurongeka kwedata rako rebhizinesi, uye kuwanda kwezvakatumirwa uye ongororo. Bhizinesi remuno, ingave chitoro chekutengesa kana mupi webasa, inofanirwa kubata yavo Bhizinesi reGoogle bhizinesi zvine mutsindo kuti igare ichinyatso kuoneka.
YouTube Chiteshi Chekuongorora - YouTube ndiyo yechipiri injini yekutsvaga uye hapana chikonzero chekusavapo ipapo. Iko kune tani ye mhando dzakasiyana dzemavhidhiyo kuti bhizinesi rako rinofanirwa kunge richishanda kuendesa organic traffic kumavhidhiyo uye kutumira traffic kubva kuYeTute kune yako saiti. Pasina kutaura kuti mavhidhiyo anozosimudzira chiitiko chevashanyi pane yako webhusaiti. Isu tinoedza kuve neyakafanira vhidhiyo pane yega peji peji rebhizinesi saiti kuti tishandise kune vashanyi vanoikoshesa pamusoro pekuverenga toni yeruzivo mune peji kana chinyorwa.
SEMrush - Kune akatiwandei mashoma SEO zvishandiso kunze uko kwekutsvaga organic. Ini ndashandisa SEMrush kwemakore, saka ini handisi kuyedza kukukanganisa pamusoro peumwe wevamwe kunze uko… ndinongoda kuve nechokwadi kuti unonzwisisa kuti iwe inofanira kuva kuwana izvi zvishandiso kunyatso tarisa yako yekutsvaga kwekuita kuita. Kana iwe ukavhura bhurawuza uye wotanga kutarisa kune yekutsvaga injini mhedzisiro mapeji (SERPs) urikutsvaga zvawanikwa mhinduro. Kunyangwe iwe usina kupinda mukati uye muhwindo repachivande, nzvimbo yako chaiyo inogona kukanganisa mhedzisiro yauri kuwana muGoogle. Uku kukanganisa kwakajairika kwandinoona vatengi vachiita kana vachiongorora mashandiro avo… ivo vakapinda mukati uye vane nhoroondo yekutsvaga iyo ichapa mhedzisiro yemunhu inogona kusiyana zvakanyanya neavhareji mushanyi. Zvishandiso zvakaita seizvi zvinogona zvakare kukubatsira iwe kuona mikana yekubatanidza mamwe masvikiro senge Video, kana kukura ruzha rwemashoko mune yako saiti kuvandudza kuoneka kwako.
Ekunze Misiyano Inokanganisa Organic Traffic
Kuchengetedza kutaridzika kwakakwira mumhedzisiro yekutsvaga pane akakodzera mazwi ekutsvaga kwakakosha kune rako bhizinesi 'dhijitari rekushambadzira kubudirira. Izvo zvakakosha kuti urambe uchifunga kuti SEO hachisi chinhu chakamboitika nokuita… Harisi basa. Sei? Nekuda kwekunze kusiana kuri kunze kwekutonga kwako:
Kune mawebhusaiti anokwikwidzana newe ekumisikidza senge nhau, madhairekitori, uye mamwe masaiti eruzivo. Kana vakagona kuhwina tsvakiridzo yakakodzera, zvinoreva kuti vanogona kukubhadharisa iwe kuti uwane kune vateereri vavo - kunyangwe zviri mumashambadziro, kutsigira, kana kuiswa kwakakurumbira. Muenzaniso wakanaka maYellow Mapeji. YemaPeji mapeji anoda kuhwina mitsva yekutsvaga iyo yako saiti inogona kuwanikwa kuitira kuti iwe unomanikidzwa kuibhadhara ivo kuti vawedzere kuoneka kwako.
Kune mabhizinesi ari kukwikwidza kupokana nebhizinesi rako. Ivo vanogona kunge vachiisa mari zvakanyanya mune zvemukati uye SEO kuti vawane mari pazvinhu zvakakodzera zvekutsvaga zvauri kukwikwidza pairi.
Kune ruzivo rwevashandisi, algorithmic chinzvimbo chinzvimbo, uye kuenderera kuyedza kunoitika pane dzekutsvaga. Google iri kuramba ichiedza kuvandudza ruzivo rwevashandisi uye nekuona mhinduro dzekutsvaga. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuve neyako yekutsvaga mhedzisiro rimwe zuva uye wotanga kuirasa rinotevera.
Kune ekutsvaga maitiro. Keyword mubatanidzwa unogona kuwedzera uye kuderera mukuzivikanwa nekufamba kwenguva uye mazwi anogona kutochinja zvachose. Kana iwe uri kambani yekugadzirisa HVAC, semuenzaniso, iwe uchaenda kukwirisa pane AC mune inopisa mamiriro ekunze uye yevira nyaya mune inotonhora mamiriro ekunze. Nekuda kweizvozvo, sezvo iwe uchiongorora yako yemwedzi-pamusoro pemwedzi traffic, huwandu hwevashanyi hunogona kuchinja zvakanyanya neyakajairwa.
Sangano rako reSEO kana chipangamazano rinofanirwa kunge richichera mune iyi data uye uchinyatso kuongorora kuti urikuvandudza here kana kwete neizvi zvekunze kumusoro kwepfungwa.
Kuongorora Mazwi Akakosha Anokosha
Wati wambowana iyo SEO kukanda uko vanhu vanoti kuti ivo vanokutora iwe paPeji 1? Ugh… bvisa iwo mapango uye usavape iwo nguva yezuva. Chero ani anokwanisa kurongedza papeji 1 yezwi rakasarudzika… zvinotora chero kuedza. Izvo zvinonyatso batsira mabhizinesi kutyaira organic mhedzisiro ndeyekuisa mari kune isina-makisheni, akakodzera mazwi anotungamira anogona kuve mutengi kune yako saiti.
Vakapiswa Keywords - Kana iwe uine rakasarudzika zita rekambani, zita rezvigadzirwa, kana kunyangwe mazita evashandi ... mikana ndeyekuti iwe urikuda kurongedza aya mazwi ekutsvaga zvisinei nekushomeka kwaunoisa iwe saiti yako. Ini zvirinani chinzvimbo pane Martech Zone… Izita rakanakisa renzvimbo yangu rave neanopfuura makore gumi. Sezvo iwe uchiongorora yako masosi, akapiswa mazwi akakosha maringe neasina-mavara mazita akakosha anofanirwa kuongororwa zvakasiyana.
Kuchinja Keywords - Haasi ese asina-mazita emakiyi akakosha, chero. Nepo yako saiti inogona kuverengera pamazana ematemu, kana asiri iwo anokonzeresa akakodzera traffic iri kuita neyako brand, nei uchinetseka? Isu takafungidzira SEO mitoro kune akati wandei vatengi kwatave takadzora zvakanyanya yavo organic traffic tichiwedzera shanduko yavo nekuti isu tinotarisa pane zvigadzirwa nemasevhisi iyo kambani inofanirwa kupa!
Anobudirira Keywords - Iri zano rakakosha mukugadzira a raibhurari yezvinyorwa iri kupa kukosha kune vashanyi vako. Kunyangwe vasiri vese vashanyi vanogona kushanduka kuita mutengi, kuve iro rakazara uye rinobatsira peji pane musoro wenyaya kunogona kuvaka zita rako rechiratidzo nekuziva online.
Isu tine mutengi nyowani anga aisa makumi ezviuru mune saiti uye zvemukati pamusoro pegore rapfuura kwavanotarisa pamazana e mazwi ekutsvaga, uye handina kumbove nekutendeuka kubva pawebhusaiti. Zvizhinji zvezvirimo hazvina kana kutarisirwa kune avo chaiwo masevhisi… ivo chaizvo vakaisa pamatanho pamasevhisi avasina kupa. Kutambisa simba zvakadii! Isu tabvisa izvo zvemukati sezvo ivo vasina basa kune vateereri vavari kuyedza kusvika.
Zvakaguma nei? Pasina mazwi akakosha akaiswa… ane chakakura wedzera mune akakodzera organic search traffic:
Monitoring Maitiro Akakosha Kune Organic Kutsvaga Performance
Sezvo yako saiti iri kufamba nemugungwa rewebhu, pachave nekukwira nekudzika mwedzi wega wega. Ini handina kumbotarisa pane pakarepo masosi uye traffic kune vatengi vangu, ini ndinovasundidzira kuti vatarise iyo data nekufamba kwenguva.
Kuverenga kweMashoko Akakosha Nechinzvimbo Kupfuura Nguva - Kuwedzera peji renji kunoda nguva uye simba. Sezvo iwe paunenge uchiwedzera uye uchiwedzera zvirimo zvepeji rako, kusimudzira iro peji, uye vanhu vachigovana peji rako, chinzvimbo chako chichawedzera. Nepo zvigaro zvepamusoro zviri papeji 3 zvine basa, iwo mapeji anogona kunge akatanga kumashure pane peji 1. Ini ndoda kuona kuti mapeji ese ewebhusaiti akarongedzwa zvakanaka uye chinzvimbo changu chese chinoramba chichikura. Izvi zvinoreva kuti basa ratiri kuita nhasi rinogona kusatombobhadhara mukutungamira nekutendeuka kwemwedzi… asi tinogona kuratidza vatengi vedu kuti tiri kuvafambisa nenzira kwayo. Ive neshuwa yekukamuranisa iyi mhedzisiro kuva yakamisikidzwa vs. isiri-yakashongedzwa akakodzera mazwi sezvakakurukurwa pamusoro.
Nhamba yeO Organic Vashanyi Mwedzi Pamwedzi - Uchifunga nezve mafambiro emwaka emazwi ekutsvaga ane chekuita nebhizinesi rako, iwe unoda kutarisa kuwanda kwevashanyi kunowanikwa newebsite yako kubva kunjini dzekutsvaga (nyowani nekudzoka). Kana kutsvagisa maitiro kwakaenderana mwedzi pamusoro pemwedzi, iwe uchazoda kuona kuwedzera kwenhamba yevashanyi. Kana zvimiro zvekutsvaga zvachinja, iwe uchazoda kuongorora kuti uri kukura here kunyangwe nemaitiro ekutsvaga. Kana nhamba yako yevashanyi yakati sandara, semuenzaniso, asi maitiro ekutsvaga ari pasi pemazwi akakosha… urikunyatso kuita zvirinani!
Huwandu hweVanyoreri Vemwedzi Vanoshanya Gore Gore - Uchifunga mafambiro emwaka emazwi ekutsvaga ane chekuita nebhizinesi rako, iwe zvakare uchazoda kutarisa huwandu hwevashanyi iyo yako saiti inowana kubva kunjini dzekutsvaga (nyowani nekudzoka) zvichienzaniswa negore rapfuura. Nguva yemwaka inokanganisa mabhizinesi mazhinji, saka kuongorora huwandu hwevashanyi mwedzi wega kana uchienzaniswa nenguva yapfuura ndiyo nzira huru yekuona kuti urikuvandudza here kana iwe uchida kuchera kuti uone izvo zvinoda kugadziriswa.
Nhamba Yekushandurwa kubva kuOrganic Traffic - Kana wako agency yemubatsiri asiri kusunga traffic uye maitiro kune chaiko bhizinesi mhedzisiro, ivo vari kukundikana iwe. Izvo hazvireve kuti zviri nyore kuita… hazvisi. Rwendo rwevatengi rwevatengi nemabhizinesi harusi rwakachena sales salesnel sezvatinga fungidzira. Kana isu tisingakwanise kusunga yakatarwa nhamba yefoni kana webhu kukumbira kune sosi yekutungamira, isu tinosundira vatengi vedu zvakaoma kuvaka zvakajairika mashandiro maitiro ayo anonyora iwo manyuko. Tine cheni yemeno, semuenzaniso, iyo inobvunza wese mutengi mutsva kuti vakanzwa sei nezvavo… vazhinji vava kutaura Google. Nepo izvo zvisingasiyanise pakati pemepu kurongedza kana iyo SERP, tinoziva kuti kuedza kwatiri kushandisa kune ese ari maviri kuri kubhadhara.
Kutarisa pakutendeuka kunokubatsira iwe ku gadziridza shanduko! Tiri kusundira vatengi vedu zvakanyanya uye nekuwedzera kuti tibatanidze mhenyu chat, tinya-kufona, mafomu akareruka, uye zvinopihwa kuti ubatsire kuwedzera kutendeuka. Ndeapi mashandisiro ekumisikidza kumusoro uye kukura yako organic traffic kana isiri kutyaira yakawanda inotungamira uye shanduko ?!
Uye kana iwe usingakwanise kushandura organic mushanyi kuva mutengi izvozvi, saka unofanira zvakare kuendesa nzira dzekurera dzinogona kuvabatsira kufamba rwendo rwevatengi kuti vave mumwe. Tinoda matsamba, kudonhedza mushandirapamwe, uye tinopa kusaina-kumusoro kuti vanyengere vashanyi vatsva kuti vadzoke.
Standard SEO Mishumo Haingataure Iyo Yese Nyaya
Ini ndichave akatendeseka kuti ini handishandise chero emapuratifomu ari pamusoro kuburitsa chero akajairwa mishumo. Hapana mabhizinesi maviri akafanana chaizvo uye ini ndiri kunyatsoda kutarisisa kwakawanda kwatinogona kuwedzera nekusiyanisa zano redu pane kutevedzera nzvimbo dzinokwikwidza. Kana iwe uri hyperlocal kambani, semuenzaniso, kuongorora kwako kwepasirese kutsvaga traffic kukura hakusi kuzonyatso batsira, ndizvo? Kana iwe uri kambani nyowani isina chiremera, haugone kuzvienzanisa nemasosi ari kuhwina mitezo yepamusoro yekutsvaga. Kana kunyangwe iwe uri bhizinesi diki riine shoma bhajeti, uchimhanyisa mushumo kuti kambani ine miriyoni-madhora ekushambadzira bhajeti haina musoro.
Dhata rega rega revatengi rinoda kusefetwa, kupatsanurwa, uye kutariswa kune avo vavanovavarira vateereri uye mutengi kuitira kuti iwe ugone kukwidziridza yavo saiti nekufamba kwenguva. Wako agency kana chipangamazano anofanirwa kunzwisisa bhizinesi rako, waunotengesera, chii chako chakasiyana, wobva wadudzira izvo kumadhibhodhi uye metric izvo zvakakosha!
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we SEMrush uye ndiri kushandisa yedu yakabatana link mune ino chinyorwa.
Tags: vakapiswa keywordsakachinja mazwi akakoshagoogle analyticsgoogle bhizinesikeyword positionkeyword chepamusorokeyword kueramazwi akadzama-asina mazita ezvinyorwashanduko yehupenyuorganic trafficorganic traffic kusianaorganic vashanyiakakosha mazwiSearch Engine Optimizationmazwi ekutsvagasemrushseoseo kuitaseo inoshumaseo zanaYouTubeYouTube chiteshi analyticsKutsvaga kweYouTube